Zeziphi izinto ezinokubangela isikali se-EPCs kunye nabaphuhlisi abanokukwenza ngempumelelo ukukala ukusebenza
Zeziphi izinto ezinokubangela isikali se-EPC kunye nabaphuhlisi abanokukwenza ukuze baphumelele ukusebenza
Ngu-Doug Broach, uMlawuli woPhuhliso lweShishini lweTrinaPro
Kunye nabahlalutyi beshishini bexela kwangaphambili imisila yomsila eluncedo yesikali elanga, ii-EPCs kunye nabaphuhlisi beprojekthi kufuneka bakulungele ukukhulisa imisebenzi yabo ukuhlangabezana nale mfuno ikhulayo. Kanye njengakuwo nawuphi na umzamo weshishini, inkqubo yokwenza umsebenzi iza izele ziingozi zombini kunye namathuba.
Cinga ngala manyathelo mahlanu okulinganisa ngempumelelo ukusebenza kwelanga:
Ukuthengwa kweentengiso nge-one-stop shopping
Umsebenzi wokulinganisa ufuna ukumiliselwa kweempawu ezintsha ezenza ukuba ishishini lisebenze ngakumbi kwaye lilungelelaniswe. Umzekelo, endaweni yokujongana nenani elonyukayo labanikezeli kunye nabasasazi ukuze bahlangabezane nemfuno ekhulayo ngexesha lokunyuka, ukuthengwa kunokwenziwa lula kwaye kulungelelaniswe.
Enye indlela yokwenza oku kubandakanya ukudibanisa yonke imodyuli kunye necandelo lokuthengwa kwempahla kwindawo enye yokuthenga enye. Oku kususa isidingo sokuthenga kubanikezeli abaninzi kunye nabanikezeli, kwaye emva koko kulungelelaniswe ukuhanjiswa kunye nokuhanjiswa kwempahla kunye nomnye wabo.
Ukukhawulezisa amaxesha onxibelelwano
Nangona isikali esilingana neeprojekthi zombane (i-LCOE) siqhubeka ukwehla, iindleko zokwakha abasebenzi ziyenyuka. Oku kuyinyani ngakumbi kwiindawo ezinje ngeTexas, apho amanye amacandelo ombane anje ngokuqhekeka kunye nokugrunjwa kolwalathiso kukhuphiswano lwabagqatswa abafanayo bomsebenzi njengeeprojekthi eziluncedo zelanga.
Iindleko zophuhliso lweeprojekthi ezisezantsi ngamaxesha okudibanisa ngokukhawuleza. Oku kuthintela ukulibaziseka ngelixa kugcinwa iiprojekthi kwishedyuli nakwibhajethi. Izisombululo zelanga zokunceda izisombululo zinceda ekwenzeni indibano yenkqubo ikhawuleze ngelixa iqinisekisa ukusebenzisana kunye nokukhawulezisa ukunxibelelana kwegridi.
Khawulezisa i-ROI ngamandla aphezulu okuzuza
Ukuba nezixhobo ezininzi ezandleni yenye into ebalulekileyo eyimfuneko ukuze ulinganise ukusebenza ngempumelelo. Oku kuvumela amathuba amakhulu otyalo mali kwinkampani ekuthengeni izixhobo ezongezelelweyo, ukuqesha abasebenzi abatsha nokwandisa izixhobo.
Ukudibanisa iimodyuli, ii-inverters kunye ne-single-axis trackers zinokuphucula ukusebenzisana kunye nokunyusa amandla. Ukonyuka kokuzuzwa kwamandla kukhawulezisa i-ROI, enceda abathathi-nxaxheba babele izixhobo ezininzi kwiiprojekthi ezintsha zokukhulisa amashishini abo.
Cinga ukulandela abatyali mali bamaziko ngezemali
Ukufumana abaxhasi bezemali abafanelekileyo kunye nabatyali mali kubalulekile ekukhuleni. Abatyali mali bamaziko, anje ngepenshini, i-inshurensi kunye neengxowa-mali zeziseko zophuhliso, bahlala bejonge iiprojekthi ezizinzileyo ezinikezela ngembuyekezo ezinzileyo, yexesha elide "njengebhondi".
Njengoko amandla elanga eqhubeka nokukhula kwaye ebonelela ngembuyekezo engaguquguqukiyo, uninzi lwabatyali mali bamaziko ngoku bayijonga njengempahla enokubakho. I-Arhente yaMandla aHlaziyiweyo yeHlabathi (i-IRENA) inike ingxelo a ukukhula kwenani leeprojekthi zamandla ahlaziyekayo ngokuthe ngqo ezibandakanya abatyali mali bamaziko Ngo-2018. Nangona kunjalo, ezi projekthi zibalelwa kuphela malunga neepesenti ezi-2 zotyalo-mali, ukucebisa ukuba amandla eziko anokubakho asetyenziswa kakhulu.
Iqabane kunye nomboneleli wesisombululo sonke selanga
Ukulungelelanisa onke la manyathelo kwinkqubo enye engenamthungo kunokuba lelinye lawona macandelo anzima ekusebenzeni komgangatho. Thatha umsebenzi omninzi ngaphandle kwabasebenzi abaneleyo bokuwuphatha wonke? Umgangatho womsebenzi uyahlupheka kwaye amaxesha abekiweyo aphosiwe. Ngaba uqesha ngokufanelekileyo abasebenzi abangaphezulu kwenani lomsebenzi oza kungena? Iindleko ezingaphezulu kwezabasebenzi ziyanyuka ngaphandle kokuba imali ingene ukujongana nezi ndleko.
Ukufumana ulungelelwaniso olufanelekileyo kuyinkohliso. Nangona kunjalo, ukubambisana kunye nomnikezeli wesisombululo se-smart-in-one kungasebenza njengomlinganiso omkhulu wokulinganisa imisebenzi.
Kulapho isisombululo seTrinaPro singena khona. Nge-TrinaPro, abathathi-nxaxheba banokuhambisa amanyathelo afana nokuthengwa, uyilo, unxibelelwano kunye ne-O & M. Oku kuvumela abathathi-nxaxheba ukuba bajolise kweminye imiba, enje ngokuqala ngakumbi kwezikhokelo kunye nokugqitywa kwesivumelwano sokulinganisa ukusebenza.
Phuma Incwadi yesiKhokelo seSisombululo seTrinaPro yasimahla yokufunda okungakumbi malunga nendlela yokulinganisa ngempumelelo ukusebenza kwelanga.
Esi sisavenge sesithathu kuthotho oluneenxalenye ezine kwisikali sokulinganisa eluncedo. Jonga ngokukhawuleza kungekudala ngezavenge ezilandelayo.